I-Ultrasonication Yonga Amandla Nezindleko - Hielscher Ultrasound Technology
Ukushintshela kwamakhasimende ajwayelekile, ama-mixers e-hydrodynamic kanye nezigayidi ezikhungethweyo ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic yokucubungula kunezela kokubili izindleko zezindleko futhi kwenza ukucubungula imvelo.
Ngenxa yokwanda kwamanje kanye nokuqhubeka kwamanani kagesi ukusetshenziswa kwamandla kunomthelela oqondile futhi omkhulu ekubhekiseni izindleko zempahla, njengokuthi inks, ezinengilazi futhi Biodiesel.
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asebenzisa amandla amancane kunezinhlelo zendabuko yemishini futhi azuze imiphumela ephakeme yokucubungula. Ngakho-ke, ukushintsha kusuka ku-rotor-stator-mixers kanye ne-homogenizers ephakeme yomsindo ukuze i-ultrasonication igcine ugesi obalulekile. Lokhu kungashintsha ekugcineni imali eyindleko eminyakeni eminingi.
I-Frictional Heat ayiMandla Engasetshenzisiwe
Amasistimu avamile amandla avulekile ekushiseni okushisa. Amapompu aphezulu okucindezela ama-homogenizers aphezulu, kanye nama-mixer blade blade kanye nezigayidi ezikhungethweyo ze-bead zidala ukuqhuma okukhulu kwesikhewu njengoba kusetshenzwa. Lezi zinkimbinkimbi zibangela ukungezwani phakathi kwezinhlayiya zamanzi kanye naphakathi kwe-liquid kanye nezingxenye ezikhungethweyo. Ukungqubuzana kuguqula amandla okufakelwa ekushiseni okukhathele. Le ngxenye yamandla okufakwayo ilahlekile, ngoba ayikhiqizi noma yikuphi ukuhlakazeka, umonakalo we-homogenizing noma ukukhwabanisa.
Ngokufana nokuqhathanisa phakathi kwe-bulb evamile kanye ne-bulb fluorescent, ijwayelekile iguqula amandla amaningi okushisa. Ngakho-ke kudinga amandla amaningi ukunikeza izinga elifanayo lokukhanya.
Uma kwenzeka izinhlelo zokuxuba ezivamile, ukushisa okukhathele kwenza kube namandla engeziwe okupholisa uketshezi ngesikhathi sokucubungula.
Amadivaysi ama-ultrasonic ama-Hielscher anekhono eliphezulu kakhulu lokuguqula ugesi cavitation ngaphakathi ketshezi.
ngaphakathi ketshezi. Ukusebenza kahle kwamandla amadivaysi ultrasonic yezimboni kufinyelele. 80-90% kusuka ipulagi yamandla ibe yiketshezi
(chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukwandise ishadi).
Okubaluleke nakakhulu, amabutho okugaya abeka ukucindezeleka okuningi emaqenjini. Yingakho ngokuvamile kuncane amandla okudingeka ukuthi athole ukusabalalisa okuhle, i-emulsion noma usayizi wezinhlayiyana eziphansi. I-Hielscher Ultrasonication idala ukufudumala okufudumele, nakuba kunenani eliphansi kakhulu kunezingxube ezijwayelekile zokuxuba. Lesi silinganiso esiphansi sishintsha ekusebenzeni okungeziwe ngokudinga amandla angaphansi ukuhlinzeka ngezinga elifanayo lokuhlakazeka noma ukwenza i-homogenizing futhi futhi kunciphisa amandla okudingekayo ekupholiseni ketshezi elicutshungulwe.
Isibonelo: Ukucubungula kwe-Biodiesel
Ikakhulu ekusetshenzisweni kwamakhemikhali okunye nokusimamisa, njenge-biodiesel, ukusetshenziswa kwamandla nokulondolozwa kwalokhu kubaluleke kakhulu. Ugesi osetshenziselwa ukukhiqiza “oluhlaza” uphethiloli unomthelela oqondile emafutheni amakhulu kagesi kanye ne-CO2 ibhalansi.
Ishadi kuya kwesokudla (chofoza ukuze ubone ukubuka okukhulu) kubonisa ukuqhathanisa phakathi kwe-cavitation ye-ultrasonic, ukukhishwa okuphezulu kwe-shear ne-hydrodynamic cavitation. Ukusebenzisa amadivayisi we-Hielscher ultrasonic for the ukucubungula kwe-biodiesel kudinga cishe. 1.4kWh / m³. Ukuze uzuze umphumela ofanayo usebenzisa i-hydrodynamic magnetic impulse cavitation, kudinga cishe. 32.0kWh / m³. Ukuxuba okuphezulu kwe-Shear kudinga cishe. 4.4kWh / m³. Lokhu kusho ukuthi ukuthi i-hydrodynamic impavse cavitation idinga cishe. Izikhathi ezingu-23 ngaphezulu kwamandla nokukhishwa okuphezulu kwe-shear ukuxuba approx. Amandla angaphezu kuka-3 ngaphezu kwamadivayisi we-Hielscher ultrasonic ukuhlinzeka nge-evenput efanayo.
Lokhu kubangela izindleko zamanzi kagesi eziphakeme kakhulu. Lokhu kuyindleko enkulu yobunikazi obufanele ukuthi buhlolwe uma kutshalwa imali ebuchwepheshe bokucubungula.
Shintsha Kwenziwe Kulula
Amadivaysi ama-ultrasonic ama-Hielscher angahlolwa kalula ngenqubo yabo yokusebenza kahle ngezinga elincane. Ngokuvamile, i I-UIP1000hd (1kW) isetshenziselwa ukuthuthukiswa kwenqubo yezinga lokugeleza kusuka ku-0.5L kuya ku-1000L ngehora. Kulesi sikali, ukusebenza kahle kokusebenza kungalungiswa ngokushintsha ukuphakama, ukucindezela nokugeleza kwezinga. Ngenxa yalokho, uzothola izidingo zamandla eziqondene nenqubo yakho. Amadivaysi e-Hielscher ultrasonic avumela ukulinganisa okulinganiselwe, ukuze imfuneko ethile yamandla igcine njalo kunoma yiliphi isilinganiso. Ngalokhu, uyazi amandla okusebenza okudingekayo kunoma yimuphi umthamo wokucubungula kanye nokusetshenziswa konyaka kagesi.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nokucubungula kwe-ultrasonic.